Dropbox inovandudzwa kuIOS 11 uye ikozvino inoenderana neyekuzvarwa kunyorera Mafaira | IPhone nhau
Dropbox inovandudzwa kuIOS 11 uye ikozvino inoenderana neyekutanga maFiles application
Zvishoma nezvishoma uye zvishoma mashandisirwo ari kuvandudzwa kuti aenderane nemabasa matsva eIOS 11. Imwe yezvinhu zvitsva zveIOS 11 inowanikwa muFiles application, application isingotibvumidze chete kuona nekuita mafaera ese ayo. isu tine yedu iCloud account, asi zvakare inotibvumidza kuwana akasiyana masevhisi ekuchengetedza gore senge Google Drive, OneDrive, Dropbox ... Iyo yekupedzisira yanga iri yekutanga iyo ichangobva kuvandudzwa kuti iwirirane neiyo iOS 11 Mafaira application.
Kutenda kune yazvino Dropbox yekuvandudza, isu tava kukwanisa kufamba nenzira yakanangana nemafaira edu kubva mugore iri sekunge tiri kuzviita kuburikidza neICloud. Parizvino, uye sezvazviri kuitika neGoogle Drive uye OneDrive, kana tichida kuwana mafaera akachengetwa mumasevhisi ekuchengetedza, hazvina kumbotaurwa zvirinani, isu tiri vhura hwindo diki kuti ufambe pakati pavo.
Iyo yeFiles application inoda kuti iyo yekushandisa application yeaya ese masevhisi iiswe uye ishandiswe kune iOS 11, zvikasadaro sarudzo yekuvawedzera kune ino application haizoonekwe. Kutenda kumabasa matsva eIOS 11, tinogona kufambisa mafaera pakati penzvimbo dzakasiyana dzekuchengetedza tinodzvanya nekuzvuva sekunge tiri kuzviita pakombuta yedu. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti basa iri rinongowanikwa mune vhezheni yeIOS 11 yeIpad.
Kana tikashandisa inopfuura gore rimwe rekuchengetedza sevhisi, iyi shanduro nyowani inobatsira nekuti inotibvumidza kuwana nekutsvaga mafaera ese atakachengeta mumasevhisi ese erudzi urwu, chimwe chinhu icho kusvika ikozvino chatisingakwanise kuita kunze kwekunge taita. kushandiswa kwewebhu sevhisi seMulticloud, sezvo mafomu anotibvumidza kuwana ese masevhisi asingatibvumidze kutsvaga kwekubatana.
Dropbox: Cloud uye Kuchengetedzavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Dropbox inovandudzwa kuIOS 11 uye ikozvino inoenderana neyekutanga maFiles application
Tim Cook anofara nemhinduro irikuwana iyo iPhone 8